(၁၃)ကြိမ်မြောက် ကျပ် ၅ဝဝ တန်အောင်ဘာလေ သိန်းဆုဖွင့်ပွဲ၏ ကျပ်သိန်းတစ်ရာနှင့် အထက် ထီဆုငွေမျာ?? - Yangon Media Group
(၁၃)ကြိမ်မြောက် ကျပ် ၅ဝဝ တန် အောင်ဘာလေ သိန်းဆုဖွင့်ပွဲ၏ ကျပ်သိန်းတစ်ရာ နှင့်အထက် ထီဆုငွေများကို ဧပြီ ၂ ရက်မှစတင်၍ နေ့ချင်းပြီးထုတ် ပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး ကျန်ဆုငွေ များကို ဧပြီ ၁၁ ရက်မှစတင်လက် ခံဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း အောင်ဘာလေသိန်းဆုဌာနခွဲမှ သတင်းရရှိသည်။ (၁၃)ကြိမ်မြောက်ကျပ် ၅ဝဝ တန်အောင်ဘာလေသိန်းဆုဖွင့်ပွဲ တွင် အက္ခရာ ၄၇ လုံးထီစာအုပ် ပေါင်း ၃၈၄၅၄၄၆ အုပ်အား ရောင်းချခဲ့ရာ ငွေကျပ်သန်းပေါင်း ၁၉၂၂၇ ဒသမ ၂၃ သန်းရရှိခဲ့ပြီး ယင်းရရှိငွေများအနက် ငွေကျပ် သန်းပေါင်း ၁၁၅၃၆ ဒသမ ၃၃၈ သန်းအား ထီဆုငွေအဖြစ်ခွဲဝေပေး ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အောင်ဘာလေသိန်းဆုဌာန ခွဲမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးကျော်သန့် လွင်က”ဒီနေ့ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့(၁၃) ကြိမ်မြောက်ကျပ် ၅ဝဝတန် အောင် ဘာလေထီဖွင့်ပွဲမှာ ဆုမဲပေါင်း ၁၂၄၂ဝ၄ ဆုကို ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အက္ခရာ ၄၇ လုံး ထီ စာအုပ်ပေါင်း ၃၈၄၅၄၄၆ အုပ် ရောင်းချခဲ့ရာကနေ ငွေကျပ်သန်း ပေါင်း ၁၉၂၂၇ ဒသမ ၂၃ သန်းရရှိ ခဲ့တယ်။ ရရှိငွေထဲကမှ ၆ဝ ရာခိုင် နှုန်းကို ဆုမဲအဖြစ်ပြန်ခွဲဝေပေး တာဖြစ်တယ်။ ကျန် ၄ဝ ရာခိုင်နှုန်း ကိုတော့ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ ပြန်လည်အသုံးပြုဖို့အတွက် နိုင်ငံ တော်အခွန်ဘဏ္ဍာအဖြစ် သိမ်းယူ မှာဖြစ်ပါတယ်”ဟု ဧပြီ ၁ ရက် ကရန်ကုန်မြို့၊ ကျောက်တံတား မြို့နယ်ရှိ အောင်ဘာလေသိန်းဆု ဌာနခွဲ၊ ထီဖွင့်ပွဲခန်းမတွင် ကျင်း ပပြုလုပ်သည့် (၁၂)ကြိမ်မြောက် ကျပ် ၅ဝဝ တန်အောင်ဘာလေ ထီဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား၌ ပြောသည်။
ထီဆုငွေများကို ကိုယ်တိုင် ဖြစ်စေ၊ တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ် လွှဲစာဖြင့်ဖြစ်စေ ရန်ကုန်မြို့နှင့် မန္တလေးမြို့တို့ရှိ အောင်ဘာလေသိန်း ဆုဌာနခွဲရုံးများတွင် လျှောက်ထား တင်ပြထုတ်ယူနိုင်ပြီး ကျပ် ၁ဝ သိန်း နှင့်အောက်ဆုငွေများကို ရန်ကုန် မြို့နှင့်မန္တလေးမြို့ရှိ အောင်ဘာ လေသိန်းဆုဌာနခွဲရုံးများအပြင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပြင်ပရှိ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၊ မြို့ နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံးများတွင် ထုတ်ယူနိုင်ကြောင်း သိရသည်။ အောင်ဘာလေသိန်းဆုဌာန ခွဲမှတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက”ရန်ကုန် မြို့နဲ့မန္တလေးမြို့မှာရှိတဲ့အောင် ဘာလေသိန်းဆုဌာနခွဲရုံးတွေမှာ ဆုငွေထုတ်ပေးမယ့်အချိန်ကို နံ နက် ၁ဝ နာရီခွဲကနေ ညနေ ၄ နာရီခွဲအထိသတ်မှတ်ထားပါ တယ်။ အောင်ဘာလေသိန်းဆု ပေါက်စဉ်ထုတ်ပေးတဲ့နေ့ကစပြီး တစ်နှစ်အတွင်းဆုတောင်းခံတာ မပြုရင်ဆုငွေတွေကို နိုင်ငံတော် အခွန်ဘဏ္ဍာငွေအဖြစ် သိမ်းယူမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မသမာသောနည်းနဲ့ ဆုငွေထုတ်ဖို့ ကြံစည်သူတွေကို တရားဥပဒေအရအရေးယူမှာ ဖြစ်ပါတယ်”ဟု ပြောသည်။
(၁၃)ကြိမ်မြောက်ကျပ် ၅ဝဝ တန်အောင်ဘာလေသိန်းဆုထီဖွင့် ပွဲတွင် အထူးဆုကြီးစနစ်ဖြင့် ကျပ် သိန်းတစ်သောင်းဆုတစ်ဆု၊ ကျပ် သိန်းငါးထောင်ဆုနှစ်ဆု၊ ကျပ်သိန်း သုံးထောင်ဆုသုံးဆု၊ ကျပ်သိန်း တစ် ထောင်ဆုခြောက်ဆု၊ ဆုတစ်ဆု ချင်းစနစ်ဖြင့် ကျပ်သိန်းငါးရာဆု ရှစ်ဆု၊ ကျပ်သိန်းသုံးရာဆု ၁၁ ဆု၊ ကျပ်သိန်းတစ်ရာဆု ၁၁ ဆု၊ ကျပ်သိန်းငါးဆယ်ဆု ၁၅ ဆု၊ ကျပ်သိန်းသုံးဆယ်ဆု ၂၂ဆု၊ ကျပ် ဆယ်သိန်းဆု ၂၅ ဆုနှင့်ဝေဝေ ဆာဆာပဒေသာဆုမဲစနစ်ဖြင့် ကျပ်သုံးသိန်းဆုပေါင်း ၁ဝဝ၊ ကျပ် နှစ်သိန်းဆုပေါင်း ၁ဝဝဝ၊ ကျပ် တစ်သိန်းဆုပေါင်း ၁၃ဝဝဝနှင့် ကျပ်ငါးသောင်းဆုပေါင်း ၁၁ဝဝဝဝ ဆုတို့ဖြင့် ဆုမဲပေါင်း ၁၂၄၂ဝ၄ ဆုကို ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ကြောင်း သိရ သည်။
အမ်ပီတီ မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ် ပွဲစဉ် ( ၉ )တွင် ဇွဲကပင်ယူနိုက်တက် အသင်းက ဧရာဝတီယူနိုက်တက် အသင်း?
လက်ရှိတွင် မိမိတို့ထက် စပါးက ရှေ့ရောက်နေကြောင်း ကွန်တီ သုံးသပ်
”သက်ငယ်မုဒိမ်း ကျူးလွန်သူတွေကို ပြင်းထန်တဲ့ ပြစ်ဒဏ်မျိုးတွေ ချစေချင်တယ်” ခန့်စည်သူ
ရီးရဲလ်ကို ငြင်းဆန်ပြီး ပီအက်စ်ဂျီကို အမ်ဘာပီ ရွေးခဲ့ခြင်းဟု ဗာဆီယက် ဆို
ဖယ်လိုင်နီကိုခေါ်ယူရန် တရုတ်စူပါလိဂ်ကလပ်များ စောင့်ကြည့်နေ